Ọdịdị nke Onye Nchịkwa Ahịa | Martech Zone
Ọdịdị nke Onye Nchịkwa Ahịa
Tọzdee, Nọvemba 1, 2012 Wednesday, October 31, 2012 Douglas Karr
Anyị kekọrịta otu infographic, Ọrụ ọhụrụ nke Chief Technology Technology Officer, mgbe oge gara aga nke kwuru okwu maka mmata na ndị isi ahịa azụmaahịa kwesịrị ịdị na nyocha nke ọma yana nwee ikike ịre ahịa.
Ihe omuma ihe omuma a bu ihe ndi ozo kariri ka o siri buru onye isi ahia. Ọ bụ ezie na anaghị m ekwenye na nke ọ bụla n'ime ndụmọdụ ndị dị n'okpuru ebe a, ọ tụrụ m n'anya na nkà na ụzụ pụtara na ọ gaghị eme ọkwa ahụ. Site na ihe ndi ozo na-ebelata ka ulo oru ndi choro mmefu ego, ndi isi ahia gha aghaghi imaputa ohere iji kpoo teknụzụ. Teknụzụ nwere ike imeri nsogbu nsogbu ma melite nsonaazụ niile.
N'ezie, ọ bụrụ na i jiri ngalaba nlọghachi na ntinye ego nke infographic tụnyere ezigbo ọrụ na ngalaba mmụta, ị ga-ahụ ntakịrị oghere! Ndi isi ahia kwesiri iru ihe omuma ha ebe ego ha nwetara. Akụkọ ihe mere eme na ego nwere ike inyere ha aka ime ya na ọfịs ndị isi, mana ụfọdụ klaasị na mgbasa ozi ọhụụ na teknụzụ n'ịntanetị ga-akwadebe ha maka ụwa n'ezie!
Infographic site na Mahadum Pepperdine Online Master of Business Administration
Tags: onye isi ahiaKeduinfographicahiaonye isi ahia